Fibromyalgia နှင့်အတူသူများအဘို့အတိုးမြှင့် mobility များအတွက်5လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း
5 Fibromyalgia နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း
14 / 02 / 2019 /0 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း, ဒူလာ/av ရေတံခွန်
Fibromyalgia သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါဖြစ်ပြီးကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၌တောင့်တင်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ နောက်ကျောနှင့်လည်ပင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလှုပ်ရှားမှုပေးနိုင်သည့် fibromyalgia ရှိသူများအတွက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း (VIDEO အပါအ ၀ င်) ၅ ခုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သိကောင်းစရာ - fibromyalgia နဲ့သင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်အောက်ကိုဆင်းပါ။
Fibromyalgia သည်ကြွက်သားများ၊ ဆက်သွယ်မှုတစ်သျှူးများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆစ်များတွင်နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါကိုပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီး၎င်းအားထိခိုက်နစ်နာသူအားပြင်းထန်သောနာကျင်မှု၊ ရွေ့လျားမှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးနှောက်မြူ (fibrotic မြူ) နှင့်အိပ်စက်ခြင်းပြproblemsနာများ။
ထိုကဲ့သို့သောနာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ခက်ခဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုရရှိရန်ခက်ခဲစေသည် - ထို့ကြောင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုနှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းများအကြောင်းသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မင်းတို့နောက်ကျောလှုပ်ရှားမှုကမင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ငါတို့တကယ်မျှော်လင့်တယ်။
အခြားနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဝေဒနာရှင်များအားကုသမှုနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပွဲဝင်ကြသည်။. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB စာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့လိုပဲ og ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေအတွက်နေ့စဉ်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ငါတို့ကိုလူမှုမီဒီယာထဲမှာပါ။
ဤဆောင်းပါးသည် fibromyalgia ရှိသူများအတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းငါးခုကိုပြပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနေ့စဉ်လုံခြုံစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတွင်သင်သည်အခြားစာဖတ်သူများထံမှမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း၏ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်နိုင်သည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားမှုငါးခုထဲကဗီဒီယိုကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကိုအောက်ပါအဆင့် ၁ မှ ၅ တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
စာရင်းသွင်းရန်အခမဲ့ခံစားရသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းပေါ်မှာ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်နေ့စဉ်အခမဲ့အကြံပေးချက်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ FB တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမျက်နှာကိုလိုက်နာပါ။
သိကောင်းစရာ - fibromyalgia ရှိလူအများစုကလေ့ကျင့်ခန်းတီးဝိုင်းတွေကိုသုံးတာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ် disse သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသို့မဟုတ် miniband) ။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကောင်းသောနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောလှုပ်ရှားမှုများရရှိရန်ကူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီမှာသင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စုဆောင်းမှုကိုကြည့်ပါ လေ့ကျင့်ရေးရထားစီး fibromyalgia နှင့်သင်နာကျင်မှုအခြေအနေကြောင့်သာမန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ခက်ခဲသောသင်နှင့်သင့်အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။
၁။ Landscape Hip လည်ပတ်ခြင်း
ဒီဟာကလူတိုင်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်နောက်ကျော၊ တင်ပါးနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းများကိုရွေ့လျားစေရန်ကောင်းမွန်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုနေ့စဉ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ရွတ်များနှင့်အရွတ်များပိုမို elasticity ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းသည်အဆစ်အရည်များပိုမိုလဲလှယ်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သဖြင့်၎င်းသည်အဆစ်များကိုချောမွေ့စေသည်။ လဲလျောင်းနေသောတင်ပါးဆုံလှည့်ခြင်းကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ကျောနှင့်တင်ပါးဆုံရိုး၌နိုးလာသည့်နေ့များတွင်ဖြစ်သည်။
ညင်ညင်သာသာသင်ဆီသို့ ဦး တည်သင်၏ခြေကိုဆွဲထုတ်။
တစ် ဦး ချင်းစီအခြမ်းအပေါ်လေ့ကျင့်ခန်း 5-10 ကြိမ်ပြန်လုပ်ပါ။
၂။ ကြောင် ("ကြောင်ကုလားအုတ်" ဟုလည်းခေါ်သည်)
ဤသည်မှာလူသိများသောယောဂလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းလေ့ကျင့်ခန်းသည်ကြောင်မှသူ၏ကျောရိုးကိုရွေ့လျားစေရန်နှင့်ခေါင်မိုးပေါ်သို့ခေါင်မိုးပေါ်သို့မကြာခဏရိုက်လေ့ရှိသည်။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင့်အားပခုံးဓါးများနှင့်နောက်ကျောအကြားရှိနောက်ကျောareaရိယာကိုပျော့ပြောင်းစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏မျက်နှာကြက်ကိုနှေးနှေးဖြင့်ရိုက်ပါ။ 5-10 စက္ကန့်ကိုကိုင်ထားပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း 5-10 ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
လူများစွာသည်နေ့စဉ်အသက်တာကိုဖျက်ဆီးသောနာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားရသည် ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုအားပေးတယ် ဤဆောင်းပါးကိုလူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါ နှင့် "နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုသည်" ဟုပြောပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ဤရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပြီးလူအများအပြားကိုအလေးအနက်ထားရန်လိုအပ်သည် - ထို့ကြောင့်သူတို့လိုအပ်သောအကူအညီကိုရနိုင်သည်။
ဤသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းနည်းလမ်းအသစ်များအတွက်သုတေသနအတွက်ပိုမိုရန်ပုံငွေသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်
ရင်ဘတ်ဆီသို့ ဦး တည်ဒူးထောက်ပါ
ဤလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏တင်ပါးများကိုစည်းရုံးရန်အထူးသင့်တော်သည်။ ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ရွေ့လျားနိုင်သောတင်ပါးကသင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏နောက်ကျောလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
တင်ပါးဆုံရိုးရွေ့လျားမှုသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းလူအများစုကလျှော့တွက်ကြသည်။ ခိုင်မာသောတင်ပါးကသင်၏သွားတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုသင်စဉ်းစားဖူးသလော။ အကယ်၍ သင်၏သွားသည်မကောင်းလျှင်ပြောင်းလဲသွားပါက၎င်းသည်နောက်ကျောတင်းကျပ်မှုနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းပြproblemsနာများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
၎င်းသည်နေ့စဉ်အသက်တာ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးပြီးကြွက်သားများ၊ ရွတ်များနှင့်ခိုင်မာသောအဆစ်များသို့သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ကြွက်သားများနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောအဆစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သောအာဟာရများကိုလည်းသွေးစီးဆင်းမှုတွင်သယ်ဆောင်သည်။
ညင်ညင်သာသာသင့်ရင်ဘတ်ကိုဆန့ ်၍ ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုဆန့ ်၍ သင်၏ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုခေါက်ပါ။
တစ်ဖက်စီတွင်လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
4. ဘေးထွက် Bearing အတွက်ပြန် Mobilization
fibromyalgia ရှိသူများသည်နောက်ကျောနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းဒေသများတွင်နာကျင်မှုခံစားရလေ့ရှိသည်။ ဤသည်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကျောကြွက်သားထုံးလျှော့ပေးရေးနှင့်တိုးမြှင့်နောက်ကျောလှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
၅။ Back Extension (Cobra)
ပဉ္စမနှင့်နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းမြွေဆိုးဟုလည်းလူသိများသည် - မြွေသည်မြွေဆိုး၏ခြိမ်းခြောက်မှုခံရလျှင်ဆန့ ်၍ အရပ်ရှည်ရှည်ရပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်နောက်ကျောနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းသို့လည်ပတ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။
ဂရုတစိုက်ထပ်ဖျာအပေါ် drop ။
လေ့ကျင့်ခန်း ၅-၁၀ မှထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောမည်သူမဆိုအတွက်ဂျင်းကိုအကြံပြုနိုင်သည် - ၎င်းတွင်၎င်းအမြစ်သည်တစ်ခုရှိသည်ကိုလည်းလူသိများသည်။ အခြားအပြုသဘောဆောင်သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုရရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျင်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရိုးပွရောဂါရှိသူများသည်ဂျင်းကိုလက်ဖက်ရည်အဖြစ်သောက်ကြသည် - ထို့နောက်အဆစ်အတွက်ရောင်ရမ်းခြင်းအလွန်အားကြီးသောအခါကာလအတွင်းထို့နောက်ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်နေ့လျှင်3ကြိမ်။ သင်ဤအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုအောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ဂျင်းကိုစားသုံးခြင်း၏မယုံနိုင်စရာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၈ ခု
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသူများစွာတို့သည်တင်ပါးနှင့်ဒူးတို့တွင် osteoarthritis (osteoarthritis) ကြောင့်လည်းထိခိုက်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး၌ဒူးခေါင်း၏အရိုးပွရောဂါ၏ကွဲပြားသောအဆင့်များနှင့်အခြေအနေမည်သို့တိုးတက်သည်ကိုသင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - ဒူးဆစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဆင့် ၅ ဆင့်
အောက်ပါဗီဒီယိုသည်တင်ပါး၏ osteoarthritis အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း၏ဥပမာတစ်ခုပြသထားတယ်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုလည်းဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို - တင်ပါးအတွင်းရှိအရိုးအဆစ်နာရောဂါ (၇) ခု (ဗီဒီယိုစတင်ရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ)
တနည်းကား, ငါတို့ချင်တယ် ဒီဆောင်းပါးကိုလူမှုရေးမီဒီယာဒါမှမဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေဖို့ကောင်းကောင်းတောင်းပါ (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်အခမဲ့ခံစားရ) ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fem-bevegelighetsøvelser-for-de-med-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2019-02-14 18:43:102021-03-24 13:26:235 Fibromyalgia နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း
နိမ့်ဇီဝြဖစ်၏9အစောပိုင်းလက္ခဏာများ6ပခုံး၏ထူးခြားသောအရိုးအဆစ်နာဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်း